IFANA NJANI IKARIMESI YEKARIMESI KULE NCWADI? -RADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Ngaba iKarimesi yeKrisimesi ilandela ngokusondeleyo njani inoveli yokuqala kaCharles Dickens?
USteven Knight uguqule uCharles Dickens 'IKarimesi yeKrisimesi kwiiparitha ezintathu ze-BBC - kwaye ngelixa uninzi luhlala luyinyani kwibali lasekuqaleni, kukho izinto ezimbalwa ezimangazayo eziguqukayo kunye notshintsho olukhulu njengoko uGuy Pearce ethatha indima ka-Ebenezer Scrooge.
Sithathe ukujonga emva kwinoveli yama-Victorian ukubona ukuba ithelekiswa njani nale nguqulo intsha:
Njengoko unokukrokrela, kwinoveli yoqobo ye-1843 Scrooge ayenzi zibuze, ndifanele ndisebenze njani nayo yonke le F *** ING NOISE? -UJacob Marley (uStephen Graham) akamxeleli ukuba lo asingomdlalo olungileyo.
Akukho, enyanisweni, elinye igama lokufunga naphi na kwiKrisimesi yeKarimesi. Endaweni yokuba u-Charles Dickens 'uguqulelo lukaMarley uthi: Ithuba kunye nethemba lokuthenga kwam, uEbenezer.
Kodwa umbhali uSteven Knight, owaziwa kakhulu ngedrama yakhe yaseBirmingham esekwe phakathi kweqela lemigulukudu iPeaky Blinders, ubeke intwana kaTommy Shelby kwiKrisimesi yeKarim ngokunika ingxoxo uhlaziyo lwangoku. Ngamanye amaxesha oku kuvakalelwa kukungakhathali kwaye kunzima, kodwa ubuncinci kwahlukile?
Umhlebi uBob Cratchit
… Impendulo iqala ukuvela kwisiqendu sesibini, xa sifumanisa ukuba uMary ufumene imali kuMnu Scrooge. Kodwa oku kwakungeyona isenzo sothando esivela kwi-Scrooge; ngenene, thethwano naye wenza naye waba ukhohlakele kangangokuba kukho ngokuqinisekileyo kuya kubakho umva kubabukeli.
Ukufumana imali yonyango olusindisa ubomi kwiTiny Tim (emva koko wayeneminyaka emibini ubudala), uMary waya kumphathi womyeni wakhe (ngaphandle kolwazi lwakhe) ukuya kuthetha-thethana ngemboleko. Kodwa ekuphela kwemiqathango awayekulungele ukuyinikela yile: £ 10 ngoku, kunye ne- £ 20 ukuba angangena endlwini yakhe ngeKrisimesi kwaye enze ibhidi yakhe. Xa uMary othukileyo wavuma ngokungathandabuzekiyo, wakuthatha oku njengebala kumlingiswa wakhe kunakwakhe.
Yintoni eyenziwa nguSrooge kuMary Cratchit
Into eyenziwa yiSrooge kuMary Cratchit ihlwempuzekile. Kuqala, umjongile emi phambi kwakhe kwaye achaze into azimisele ukuyenza ngemali ukusindisa unyana wakhe ogulayo:
Uzakundinika imali ukuba ndiyakuvumela ukuba wenze le nto uyifunayo.
Ndifuna ntoni? Ndifuna ukucaca.
Kufuneka nditsho ngokuvakalayo?
Emva koko ujonge njengoko ekhulula iimpahla zakhe kancinci, engcangcazela kwaye ekhala ngoloyiko kunye nokuthotywa, ngaphambi kokuba ekugqibeleni abhengeze ukuba konke yayiluvavanyo kwindalo yomntu- ukubona nje ukuba angahamba nayo. Emva koko u-blackmails uMary ukuba acenge indoda yakhe ukuba ihlale kwingqesho ka-Scrooge ngonaphakade kanaphakade, okanye inyani inokutyibilika.
Kodwa imfihlo ibuhlungu emtshatweni wakhe. UBob uyabona ukuba uMary ulusizi, kwaye ugcina into kuye malunga nesi sipho simangalisayo semali; ke ukumhlangula nosapho kwiKrisimesi eyonakeleyo, uza nolunye ubuxoki. Oku akukonelanga, njengoko uBob ngesiquphe ebhengeza ukuba uyeka umsebenzi kwaye uthatha omtsha onomvuzo ongcono. Konke oku kukuzalisa uMariya ngoloyiko malunga nento anokuthethwa yiSrooge.
Nangona kunjalo, ekugqibeleni iba nguMariya ophendulwa yimithandazo yakhe xa ebiza iiMoya, etshicela kumxhaphazi wakhe: Ndiza kuthi umthandazo, ngelinye ilanga, amandla athile obulungisa aya kukubamba emqaleni aze akutsalele kwinyani nesipili esikhanyayo, ukuze ubone inyani ekuboniseni kwakho, kwaye inyani iya kwaziwa lihlabathi. Ndingumfazi, kwaye ndinamandla okubiza imimoya enjalo. Kwaye ndiza kuba ngukumkani.
Njengoko unokucinga, akukho nanye yiyo loo nto kwincwadi.
Scrooge omncinci, othetha ngokuncokola
UCharles Dickens u-Ebenezer Scrooge wokuqala yindoda esele ikhulile enobomi obukrakra, obunoburharha obushiye uphawu emzimbeni wayo kwaye yamenza mbi. Umbhali umazisa ngala mazwi: Owu! kodwa wayeyisandla esijijelweyo kwilitye lokusila, Scrooge! ukucudisa, ukubamba, ukubamba, ukukrwela, ukubamba, ukubawa, umoni omdala! Iqinile kwaye ibukhali njengeqhwitha, ekungekho ntsimbi yakha yabetha umlilo onesisa kuyo; Imfihlo, kunye nokuziqulela, kwaye wedwa njengembatyisi. Ingqele ngaphakathi kuye yamkhathaza iimpawu zakhe ezindala, wakhupha impumlo yakhe etsolileyo, wancipha esidleleni, waqinisa ukuhamba kwakhe; wenze amehlo akhe abomvu, imilebe yakhe ebhityileyo eluhlaza Kwaye wathetha ngobukrelekrele kwilizwi lakhe elirhabaxa.
Ngokuchaseneyo, uGuy Pearce uneminyaka engama-52 kuphela kwaye- ngaphandle kwemizamo emihle yamasebe ezinto zokwenziwa kunye neenwele- mhle kakhulu, ukuba singatsho njalo.
Funda ngokugqithisileyo: Yiyo le nto uScrooge emncinci - kwaye eshushu - kuSteven Knight's A Christmas Carol
Kwinguqulelo kaSteven Knight, le Scrooge ikwanomkhwa wokuncokola ngokuvakalayo neqabane layo loshishino uJacob Marley eofisini, ngaphandle kwento yokuba uMarley (kuthiwa) ulele ebolile engcwabeni lakhe. Ezi ncoko zodwa azibonakali encwadini, kodwa zisivumela ukuba siqonde ngengqondo yakhe.
Olunye udibaniso olunomdla ebalini: kwisiqendu sokuqala, unemibono okanye umbono wendawo ethile yesihogo, enamaxhoba anegazi kunye nezandla ezibambe phezulu zihamba ngeentsimbi. Ithetha ntoni le nto? Ngethemba lokuba sizakufumanisa.
Uhambo lukaJacob Marley
Kuhlengahlengiso kumabonakude sibona iLOTI engaphezulu kukaJacob Marley kunokuba sisenza kwinovella-eziziindaba ezimnandi, kuba i-clanking phantom idlalwa nguStefano Graham obalaseleyo. Kwakhona kuthetha ukuba uSteven Knight ukhululekile ukuba afumane ubuqili kunye nohambo lukaMarley lwasemva kokufa ukuze asindise umphefumlo kaScrooge.
Ekuxeleleni kukaDickens, uMarley usweleke iminyaka esixhenxe (hayi emibini). Uchithe loo minyaka ehamba ngamaphiko omoya kungekho kuphumla, kungekho luxolo. Ngokuka-Marley, Kuyimfuneko kuye wonke umntu ukuba umoya ongaphakathi kuye uhambe ngaphandle kwamanye abantu, uhambe kude kakhulu, ke ukuba akakwenzi oko ebomini, ugwetyelwe ukubhadula kwihlabathi ukufa.
Yonke imimoya ejikelezayo inxiba imixokelelwane eyenzileyo ngelixa isaphila, kwaye ikwintlungu engakwaziyo ukunxibelelana nabaphilayo- kodwa uMarley, ngasizathu sithile, unikwe ithuba lokuba avele eScrooge ngale ngokuhlwa imbi.
Amava kaJacob Marley ahlukile kulungelelwaniso lweTV. Uhleli engcwabeni lakhe unyaka nje omnye, umoya wakhe uyazi kwaye ubanjiwe, xa esenza umnqweno owanikwa ngequbuliso. Oku kumjikisa kuhlobo lwePeaky Blinders-ish purgatory apho umnyibilikisi enze imixokelelwane yakhe aze amthumele egxadazela kwintsimi yekhephu yemithi yeKrisimesi, apho athe wanikwa imishini nguMoya weKrisimesi eyadlulayo (Andy Serkis).
Unokusindisa umphefumlo wakhe kuphela emlilweni ukuba iqabane lakhe elidala loshishino uEbenezer Scrooge lingenziwa ukuba lizikhulule ngaphambi kokufa, kuba ikamva labo liyadibana. Ke ngoko ubuyela eLondon kwimishini yokuphelelwa lithemba.
Ngokuphathelele amahashe amnyama amnyama avela kwintlambululo-miphefumlo? Kwakhona akukho kwincwadi.
Utata oxhaphazayo kaScrooge
Pha ngu intsingiselo kwinto yoqobo yokuba utata ka-Scrooge wayengekho mhle kuye. Njengodade oselula kaScrooge xa ​​esiza kumlanda esikolweni, uTata ulunge kakhulu kunangaphambili, elo khaya lifana neZulu! Wathetha kamnandi kum ngobunye ubusuku endandiyolala, kangangokuba andoyiki ukumbuza kwakhona ukuba ungabuya na ekhaya; kwaye wathi Ewe, kufanele; kwaye undithumele kumqeqeshi ukuba ndikuzise.
Kodwa kwakutheni ukuze le ntombazana yoyike ukubuza kuyise ukuba unyana wakhe angabuya ekhaya ngeeholide njengamanye amakhwenkwe? Wayenjani xa enje wayengekho unobubele?
Yiyo le nto uSteven Knight ayiphononongeyo kwisiqendu sesibini, njengoko i-Ghost of Christmas Past (Andy Serkis) iza kutyelela - ithatha uhlobo lukatata owayexhaphaza uScrooge, uFranklin Scrooge (Johnny Harris). Kuqala, sidibana nempuku emhlophe ngentsimbi entanyeni yakhe ekuthiwa ngu-Erasmus, ojika abe sisipho seKrisimesi sika-Ebenezer esidala kunina; emva koko sidibana noMnu Scrooge Senior, osusa loo mpuku ngelixa u-Ebenezer esoyika njengomntwana. U rants and raves, udelela unyana wakhe, kwaye wabelana ngefilosofi yakhe kubuntu, imali kunye nosapho.
UFranklin Scrooge uhamba indlela ende ekuchazeni ukuba kutheni uEbenezer Scrooge ephele ephosakele. Kwaye emva koko sifumanisa ...
Umphathi oyintloko ogqwethekileyo
Encwadini, sibuyela kwiintsuku zeScrooge njengomfundi osebenzela uFezziwig othandekayo. U-Old Fezziwig wayeyindoda ehlekisayo, ehlekisayo kunye nomqeshi omangalisayo owafumana uthando nozuko koogxa bakhe, kwaye ngeKrisimesi wenza itheko ngomculo kunye nokudanisa kunye nemidlalo kunye nokutya kunye nebhiya. Ukubukela bonke aba bantu bonwabile, uScrooge uphawula kuMoya: Unamandla okusinika ukonwaba okanye ukungonwabi; ukwenza inkonzo yethu ibe lula okanye ibe luxanduva; uyolo okanye ukubulaleka.
Kodwa isimilo sikaFezziwig asibonakali kuthotho lweTV, kwaye ulutsha olonwabileyo lukaScrooge alusebenzeli le ndoda imangalisayo.
Ke yintoni evela kwincwadi?
Ibinzana elidumileyo iBah! Humbug! Ngombulelo, usindile kuhambo ukusuka kwiphepha ukuya kwiscreen.
Ukuhlala sinyanisekile kwinoveli, sikwadibana namanenekazi amabini (aqokelela imali yabantu abahluphekileyo) kunye nekwayala (ekhutshiwe emnyango). Emva koko kukho umtshana ochwayitileyo owayo ukumema iSrooge kwisidlo sangokuhlwa seKrisimesi - njengesiqhelo, ngaphandle kwempumelelo.
Nje ukuba uScrooge afike ekhaya, kukho eso siganeko somnkqonkqozi emnyango, obonakala ngathi uthwele ubuso bukaJacob Marley; isidlo sakhe esincinci kwindlu enkulu, engafudunyezwanga kwaye engakhanyiswanga; Kwaye uMarley ebambelele egumbini ngomhlathi wakhe uwa kanye.
UMarley emva koko uhambisa umyalezo wakhe kunye ne-readies Scrooge kutyelelo lweMimoya emithathu.
Kwaye ngelixa kuthotho lweTV uyangqina inqaku lakhe ngokuthumela uSrooge kumbono wabasebenzi basefektri, ababenzakele babulawa kukungakhathali kwepenny njengomphathi wefektri, oku akuveli ngqo kulencwadi. Endaweni yoko, umbono kaJacob Marley ekuqaleni ubonakalisa ukuba iqabane lakhe lakudala lelabanye aboni, abagwetyelwe ukubhadula ngaphandle kwehlabathi.
Kwincwadi yakhe yenoveli, uDickens ukwasazisa kusapho lakwaCratchit-UNksk Cratchit (ngoku onikwe igama lokuba nguMary nguStephen Knight), intombi endala uMartha (ofundayo), intombi yesibini u-Belinda, inkosi encinci u-Peter enxibe iimpahla zikayise ezinkulu kakhulu, kwaye ubuthathaka Tiny Tim, owayephethe i-crutch encinci, kwaye wayenamalungu omzimba axhaswe sisakhelo sesinyithi. Bayintsapho eyonwabileyo, nangona behlwempuzekile; kodwa impilo kaTim ihlala ikhathaza.
Kwincwadi njengakuthotho lweTV, uMoya weKrisimesi odlulileyo ukwambonisa umdla wothando kwimbali yakhe yangaphambili, owamgxotha nothando lwemali ngaphezu kwayo yonke enye into.
Kukho umahluko omnye omncinci: kwiscreen, sibona umbono kaScrooge, uElizabeth nabantwana babo njengento engazange ibekho kwaye engayi kubakho, ngelixa kule ncwadi sibona umbono ofanayo walo mfazi kunye nendoda ayitshatileyo ekugqibeleni kunye usapho olonwabileyo. UDickens ubhala athi: Kwaye ngoku uScrooge ujonge kakhulu kunakuqala, xa inkosi yendlu, inentombi yakhe yayame ngothando, yahlala phantsi kunye nayo nonina emlilweni wayo; kwaye xa wayecinga ukuba esinye isidalwa, esithandekayo kwaye sizele sisithembiso, sisenokumbiza ngokuba ngutata, kwaye sibe lixesha lasentwasahlobo ebusika obunengcwangu ebomini bakhe, ukubona kwakhe kwaba mfiliba ngenene.
Udade kaScrooge, t Umoya weKrisimesi wangoku
Olu lutshintsho olukhulu! Asidibani naye kwisiqendu sokuqala, kodwa siyazi ukuba i-Ghost of Christmas Present iye yacingelwa njengo-Scrooge udade oswelekileyo uLottie obuyayo ukuzomlungisa.
Kule ncwadi, uMoya ubhekiswa kuwo njengowawo, kodwa ubonakala eyindoda endaweni yobufazi- kwaye awunanto yakwenza nabantakwabo Scrooge.
Nangona kunjalo, sifumanisa kuDickens ukuba uSroroge wayekhe wanodade wabo omncinci, uFran, awayemthanda; Wahlala ebudaleni kwaye wayenonyana omnye ngaphambi kokuba asweleke ngaphambi kwexesha.
Funda ngakumbi: Kutheni i-BBC yeKarimesi yeKrisimesi yenze utshintsho olukhulu kulo mlinganiswa uphambili
Isityhilelo sokugqibela sikaScrooge kwi-original yeKarimesi yeKrisimesi iza xa uMoya weKamva leKrisimesi emthatha (wothuka!) Kwikamva, apho abantu baxoxa ngokusweleka kosomashishini omdala. Akukho mntu wayikhathaleleyo le ndoda, kwaye akukho mntu ufuna ukuya emngcwabeni wakhe; nakwikona engacacanga yaseLondon, iqela lezaphuli-mthetho ezincinci lixoxa ngezinto abazithathileyo endlwini yakhe (kwaye bazisusa emzimbeni wakhe!) ukuba bazithengise. Kuthatha i-Scrooge ixesha elinobudenge ukuqonda ukuba le ndoda kuthethwa ngayo… nayo.
Ngokuchaseneyo, uhlengahlengiso kumabonwakude luchitha ixesha elincinci luyekelele ekufeni kweScrooge. I-Scrooge kaGuy Pearce ayishukumi xa ephinda ebuya ephepheni kwaye abone umzimba wakhe ofileyo, kwaye ithemba lokuba unyana wasemgodini waseWelsh onomsindo ojonge engcwabeni lakhe akwenzi nto ukumcaphukisa.
Esikhundleni sokukhathazeka ngokufa kwakhe yedwa, uKroroge uxhalabile kakhulu malunga nekamva leTiny Tim encinci. Akukho bazili, zizinto zehlabathi nje. Ewe okunene, umoya, andikhathali. Andikhathali ukuba kuya kuba yintoni ngam. Ndikhathalele into enye kuphela, utshilo, ongeze athi: Ekuphela kwento endifuna ukuba bayenze oomoya, kuphela kotshintsho endifuna ukuba balwenze, kukusindisa ubomi bakhe.
Ingozi encinci ye-skating Tim
Uthotho lweTV longeza ingozi kuTiny Tim.
Kwinoveli, sifunda ukuba uTim ebeya kuthi ekugqibeleni asweleke ukuba izinto beziqhubeka kule ndlela inye - kodwa ububele obutsha bukaScrooge banele ukusindisa umntwana: Kwaye kuTiny Tim, ngubani owenze njaloHAYIUkufa, wayengutata wesibini.
Ngokwahlukileyo, ekuxeleni kukaSteven Knight, uTiny Tim kufuneka afe kwingozi yokukhwela emkhenkceni kule Krismesi. Akanaxesha lide ashiyekileyo.
I-Scrooge, eyazi ukuba yintoni ezayo kwaye inomdla wokumsindisa, inikwe ithuba lokungenelela. Ubuyela kwinyani ngoSuku lweKrisimesi, kwaye unqanda isiphelo sikaTim ngokuphosa igrabile kumkhenkce kwaye eyalela inkwenkwe ukuba ihlale kude.
Sitshintshe njani isiphelo?
Utshintsho olunomdla esiphelweni!
Ekuchazeni kwasekuqaleni kukaCharles Dickens, uScrooge wenza izinto ngokufanelekileyo ngeCratchits ngokuzithumela eyona Turkey inkulu anokuyifumana (isenzo esingalawulekiyo kusapho oluhlwempuzekileyo lwaseLondon, ngokuqinisekileyo?), Undwendwele umtshana wakhe kwisidlo sangokuhlwa, ethandeka kuye wonke umntu esitratweni, enika imali isisa kwaye ekugqibeleni-ngosuku olulandelayo-anyusa umvuzo ka-Bob, ethembisa ukuxhasa usapho, kunye nokuphosa inani lamalahle emlilweni.
Ayisiyiyo kwaphela indlela eyehla ngayo kumabonwakude. Ukungena kwikhaya lakwaCratchits ngoSuku lweKrisimesi, uzibona engamkelekanga - kodwa ngokukhawuleza uxela izinto ezimbalwa: uyavala iphelele Ishishini, uBob unentsikelelo yakhe yokuyeka kwaye aye emsebenzini omtsha, kwaye ubanika i- £ 500. Ta-da! I-Scrooge izenza inqabile.
Kwaye unikwe into ayenzileyo kuMariya, naye akabaleki abaleke elidlulileyo. Andazi ukuba kwenzeke ntoni kuwe, kwaye andikhathali, uyamlumkisa. I- £ 500 yakho yamkelekile, kodwa ayizukuthenga xolelo.
Ndiza kuba yeyona nto ibalaseleyo ndinokuba yiyo, utshilo. Ngomoya kunye nokukhanya okukhanyayo nesipili, ndiyabulela kuwe.
Yongeza: Kwincwadi njengakuthotho lweTV, UMoya weKamva leKrisimesi uthule cwaka.
IKarimesi yeKarimesi yaqala nge-22nd kaDisemba ngo-9 nge-9 ngokuhlwa kwi-BBC enye, ngesiqendu sesibini ngomhla wama-23 nge-9: 05pm kunye nesiqendu sesithathu ngomhla wama-24 nge-9 ebusuku.
yintoni fa indebe imidlalo kwi tv
Iifilimu ezikumgangatho ophezulu kwi-netflix
Amaxesha kanomathotholo asasazeke kule veki
umkhusane diy igumbi umahluli
amagqabi amatsha aya kuza engqungqa